Lifepo4 ဘက်ထရီ၊ Lithium Iron Phosphate ဘက်ထရီ - PLMEN
Lithium Polymer ဘက်ထရီ
လစ်သီယမ် အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ ထုပ်ပိုး
Power Tool ဘက်ထရီ
Cylindrical Type ဘက်ထရီ
Prismatic အမျိုးအစား ဘက်ထရီ
12V Deep Cycle ဘက်ထရီ
ဘက်ထရီ OEM & ODM ဝန်ဆောင်မှုကို ကြိုဆိုပါသည်။
ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည် ဆဲလ်များကို ရွေးချယ်ကာ BMS ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ကာ ဆဲလ်များကို ထုပ်ပိုးကာ စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား turn-key ဖြေရှင်းချက်များဖြင့် ကျေနပ်စေသည်။LG/Samsung/Sanyo/Panasonic/Sony ဘက်ထရီဆဲလ်များဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော ဘက်ထရီထုပ်ပိုး။100% စစ်မှန်ကြောင်း အာမခံပါသည်။သင့်ဘက်ထရီထုပ်ပရောဂျက်များနှင့်အတူ အခမဲ့ကိုးကားမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့် PLM R&D အဖွဲ့တွင်5PHD၊ 10 MFD နှင့် 15 ဘွဲ့များအပါအဝင် အင်ဂျင်နီယာ အယောက် 30 ခန့်ရှိသည်။30 ယူနစ်ခန့်အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုစက်ကိရိယာများ၊25 nubit Semi-automatic စက်ပစ္စည်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 8 ခုရှိသည်။
အချိန်မီပေးပို့ခြင်း- PLM တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်တစ်ခုသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးပို့မှုတိုးတက်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ အလေးထားပါသည်။အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး- အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသော ထုတ်ကုန်များကို အာမခံခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကဦးစားပေးဖြစ်သည်။ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ R&D စင်တာတွင် နည်းပညာမြင့်ဖြေရှင်းနည်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အမြဲရွေးချယ်ရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။အထူးထုတ်ကုန်များ- ကမ္ဘာ့အပါးလွှာဆုံး ပါဝါဘဏ်အပါအဝင် PLM သည် တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် တောင်းဆိုချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များစွာကို ပေးဆောင်ပါသည်။အထူးကောင်းမွန်သော ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု- ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဖောက်သည်များ မျှဝေပေးသည့် ထပ်တလဲလဲ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုမှာ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု အတွေ့အကြုံအတွက် လိုအပ်ပြီး ရောင်းချခြင်းမပြုမီနှင့် အပြီးတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ ဂရုစိုက်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ မူပိုင်ဖြစ်သော ShockSpreadTM
Shenzhen Plmen Battery CO.,LTD ကို 2014 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံတွင်5နှစ်ကျော် သမိုင်းကြောင်းရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထိပ်တန်း လစ်သီယမ် အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်ပါသည်။အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ အားပြန်သွင်းနိုင်သော ပိုလီမာဘက်ထရီ၊ 18650 ဘက်ထရီထုပ်ပိုး၊ အီး-စက်ဘီးဘက်ထရီ၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီထုပ်များ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် ဘက်ထရီပရောဂျက်များဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအဖြစ် ဘက်ထရီမှ ဘက်ထရီအစိတ်အပိုင်းများအထိ တစ်ဆင့်တည်းဖြေရှင်းချက်နှင့် စီးရီးထုတ်ကုန်တစ်ခုလုံးကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
အားပြန်သွင်းနိုင်သော Deep Cycle BMS 12V 200Ah လစ်သီယမ်...
အားပြန်သွင်းနိုင်သော Deep Cycle BMS 12V 50AH 100Ah...
ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ခဲအက်ဆစ်အစားထိုး Solar RV Mari...
အရောင်းရဆုံး Lead Acid အစားထိုး Solar RV...
စက်ရုံထုတ်စျေးနှုန်း Sealed Acid Battery Replacem...
စက်ရုံစျေးနှုန်း Sealed Acid Battery Rep...
Deep Cycle Life Kids ကား LFP ဘက်ထရီ 12.8V 10ah...
Deep Cycle Life Kids ကား LFP ဘက်ထရီ 12.8V...
PLMEN မြင့်မားသောပါဝါနှင့်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်း Powerwal ...
PLMEN မြင့်မားသောပါဝါနှင့်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်း Powerw...
PLMEN 10 နှစ် စျေးသက်သာသော 2U 3U ဆိုလာဘက်ထရီ LiFeP...
PLMEN အိမ်သုံးစွမ်းအင်ပါဝါနံရံ 48v lifepo4 b...
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ကြီးမားသောစွမ်းရည်ရှိသော li-ion batt...
PLMEN လက်ကားအပူအဝတ်အစား / ခါးပတ် rech ...
PLMEN မြင့်မားသောအလင်းပါဝါထောက်ပံ့မှု 150W UPS သယ်ဆောင်ရ...
PLMEN Power Supply 150W UPS ခရီးဆောင်ပါဝါစာရင်း...
PLMEN ပူပူနွေးနွေးရောင်းချမှုစခန်းချခရီးသွားခရီးဆောင် UPS emer ...
PLMEN လက်လီလက်ကား အိတ်ဆောင် 300W Smart Solar Ups P...
စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် အရည်အသွေး၏နိယာမကို ဦးစွာလိုက်နာခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီထုတ်ကုန်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ကောင်းမွန်သောဂုဏ်သတင်းကိုရရှိထားပြီး ဖောက်သည်အသစ်နှင့် အဟောင်းများကြားတွင် တန်ဖိုးရှိသောယုံကြည်မှုရရှိထားပါသည်...
ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးမားမားအောက်တွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြင့် စတင်ပါ။
ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးမားမားအောက်တွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြင့် စတင်ပါ...
ဥရောပ ဓာတ်အား တိုးချဲ့မှု...
LFP ဘက်ထရီခြေရာခံပြိုင်ပွဲ "cham...
အထပ် 5၊ အဆောက်အဦ 6၊ Dongfanghong စက်မှုပန်းခြံ၊ Yushi လမ်း၊ Guanlan၊ Long Hua၊ 518109 Shenzhen China